Ngokusesha, Indawo Yesibili Iyilahleko Yokuqala | Martech Zone
Ngokusesha, Indawo Yesibili Imane Yilahleko Lokuqala
NgoMgqibelo, Novemba 7, 2009 NgoMgqibelo, Novemba 7, 2009 Douglas Karr
Abanye abantu bajabula kakhulu lapho beqala ukubona amakhasi abo eqala ukuvela emiphumeleni yenjini yokusesha. Izinkampani eziningi kakhulu aziqapheli ukuthi umdlalo mkhulu kangakanani nokuthi ingakanani imali esengozini uma kukhulunywa ngezinga elingukhiye nenani lokubekwa kwezinjini zokusesha.
Ngakho-ke… nasi isibonelo lapho ngingalinganisa inani lesilinganiso. Ake sicabange ukuthi siyi-Agent Real Estate Agent futhi sinomkhankaso omuhle kakhulu wokukhangisa ngebhulogi nosesho osishayela phezulu Amakhaya eSan Jose Ayathengiswa.
Ngenyanga edlule kube nokufunwa okungu-135,000 Amakhaya eSan Jose Ayathengiswa.
Intengo yasemakhaya yekhaya elithengiswayo ingama- $ 544,000 eSan Jose.
Amakhomishini we-Real Estate aphakathi kuka-3% no-6%, ngakho-ke ake sicabange ngezinga lekhomishini eliphakathi kwe-4%.
Manje ake sicabange ukuthi kuphela i-0.1% yabaseshi eholele ekuthengisweni kwangempela.
Umcwaningi we-SEO unikeze ezinye izibalo zezinga nempendulo, ngakho-ke masenze izibalo bese sibala amakhomishini ukusuka endaweni engu-8 ekhasini, ukuya endaweni engu- # 1 ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha:
Okwamanje, I-Trulia iphethe isikhundla esingu- # 1 futhi I-Zillow iphethe isikhundla esingu- # 2 - hhayi ama-real estate agents. Kodwa-ke, iqiniso lokuthi ngokumane ubambe isikhundla esingu- # 1 uTrulia ubambe ama-56% wokuchofozwa kwalokhu kusesha - kulinganiselwa ku- $ 41 billion kuReal Estate kuseshwa idolobha elilodwa. IZillow ingaphansi nje kwe- $ 10 billion. Ngesikhathi ufika ephephandabeni, i- I-Mercury News, ungaphansi nje kwe- $ 3 billion.
Ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani abenzeli nabathengisi esifundeni bevumela lezi zinkomba ukuthi ziphumelele… bona ayengakwenza ukuncintisana esikhundleni sokuthembela kubo. Bekungeke yini kuzuze ukuthi omunye wabathengisi besifunda asebenzise ama-dollar ayizigidi ezimbalwa ekumaketheni izinjini zokusesha? Yebo… yebo bekungaba njalo.
UTrulia uwina amahlandla ama-4 traffic ngaleli gama elingukhiye elilodwa! Izikhathi ezine! Lapho uhlola izinkampani zezinjini zokucinga nababonisi, ungadluli leli qiniso. Khumbula ukuthi kuqala ukubiza kakhulu ukuncintisana ngalezi zindlela zokuncintisana nokuseshwa kwevolumu ephezulu, noma kunjalo. Sisebenza neklayenti eliyisihluthulelo njengamanje futhi siyabaphoqelela phezulu ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha. Sidinga ukuthola izindawo ezingu- # 4 ukuze imikhankaso izokhokha ngokugcwele futhi isinikeze umsebenzi owengeziwe. Izigxobo zikhulu futhi sizofika lapho - kepha kudinga umzamo omkhulu.
Izinkampani eziningi ziyajabula uma zisekhasini lokuqala… iphutha elikhulu. Akwanele ukukhombisa amagama angukhiye athile emiphumeleni yenjini yokusesha - ukuwina lokho kusesha kuyisihluthulelo sokuwina ibhizinisi kanye namadola ngemuva kwalolo phenyo. Qala ukubala imbuyiselo ekutshalweni kwamagama wakho angukhiye, ama-ratios asondele, kanye nemali engenayo. Ungathola ukuthi kufanelekile ukuchitha amakhulu ezinkulungwane zamaRandi ngamasu wokumaketha okusesha. Uma ungakuqapheli - mhlawumbe umncintiswano wakho uzokwenza.
Njengoba ubaba wami ayevame ukungitshela… “Indawo yesibili yilahleko lokuqala nje".
Tags: UBrian Goffmani-edgerankilinganiswa kanjani i-kloutamandla ephasiwediezoku-socialyezinc
Izimpahla zikaDick's Sporting Goods Ukushayela Imithombo Yezokuxhumana nge-imeyili
Nov 8, 2009 ngo-9: 24 PM
I-Well Said - inhloso enkulu yanoma iyiphi iwebhusayithi noma inkampani yokumaketha izinjini yokusesha ukufika ku- # 1. Yilapho imali enkulu ikhona…
Nov 9, 2009 ngo-5: 48 PM
Umehluko phakathi kuka # 1 no- # 2 mkhulu kakhulu kunalokho ebengicabanga ukuthi kuzoba njalo.
Kazi lokhu kuzohlala kungaguquguquki noma amakhasimende azoqala ukubhoboza kancane uma imakethe ivuthwa kancane…